XOG: Farmaajo oo ka cabsanaya in ciidamadu khaarijiyaan | KEYDMEDIA ONLINE
Dhamaadki bishii April, Ciidankii ugu badnaa oo ka tirsan Xoogga Dalka, ayaa dib ugu soo laabtay Caasimadda, kadib markii uu Farmaajo, sameystay muddo kororsi, kuwaas oo noqday ciidankii ugu horreeyay taariikhda Africa, ee xukunka ka badbaadiya gacan kalitalis, kuna ilaaliya wadada qori-isku-dhiibka ee dimuraadiyadda.
MUQDISHO, Soomaaliya – Inta badan ciidamada Soomaaliyeed ayaa ka hor yimid muddo kordhintii uu Farmaajo sameystay bishii April ee sanadkaan, waxayna kaabiga Madaxtooyada dhigteen fariisimo, kadib dagaallo dhacay galinkii danbe ee 25-kii bishaas, halkaas oo qaarkood ay kula hadleen warbaahinta iyaga oo Farmaajo ugu baaqay in ka baxo Villa Soomaaliya, maadaama mudadiisii shacgiga ahayd idlaatay.
Sida ay Keydmedia Online, u xaqiijiyeen ilo loo qaateen ah, tan iyo xilligaas, Farmaajo waxaa soo food saartay cabsi hor leh, wuxuuna guud ahaan ka aamin baxay nuucyada kala duwan ee Ciidamada Qalabka Sida, marka laga yimaado ilaaladiisa gaarka ah, oo u badan dhalinyaro ay qaraabo yihiin.
Kulan u jeedkiisu ahaa sameynta barabagaando hor leh, ayaa la qorsheeyay in uu la qaato qeyb ka mid ah ilaalada Madaxtooyada, (Koofiya Cas), maalitii koobaad ee Ciidda Carafo, hayeeshee, sida uu KON, ugu warramay sargaal sare, oo fadhigiisu yahay Caasimadda, waxaa dhamaan ciidamada iyo madaxdoodii la kulmay Farmaajo laga aruuriyay hubka, cabsi jirta awgeed.
Ka hor inta uusan madashii kulanka tagin Farmaajo, waxaa goobta gaaray koox xaafiiskiisa ka socotay, waxaana dhamaan hubkii laga aruuriyay ciidamada, isla-markaana qaab uu cadaadis ku dheehan yahay ayaa saraakiisha ciidanka looga qaaday bastooladaha.
Isla sidaas oo kale, waxa ay dhawaan ka dhacday Xarunta Murtida iyo Madadaalada, (Tiyaatarka Qaranka), markaas oo Farmaajo bulsho u badan haween iyo carruur dan yar ah oo laga soo aruuriyay degmooyinka gobolka uu khudbad u jeedinayay 1-dii Luuliyo.
Farmaajo, wuxuu hore caan ugu ahaa xirashada jaakadda aan xabaddu karin, hayeeshee, afar sano kadib wuxuu u muuqdaa in uu qarsan waayay cabsida uu ciidanka ka qabay tan iyo markii uu xaafiiska yimid.
Wuxuu awoodi waayay, inuu munaasadaha Ciidaha, bulshada kula tukado, masaajidka Isbahaysiga, ama goobo kale, sida ay hore caan ugu ahaayeen Madaxdii ka horeysay, wuxuuna sida muuqata ku fashilmay inuu dhiso kalsoonida ciidanka.
Wuxuu noqday Madaxweynihii ugu horreeyay ee muddo 10 sano ka badan, Ciidanka Qalabka Sida labo saf kala galiya, tan iyo dowladdii Cabdullahi Yuusuf, isla-markaana qeyb ka mid ah ku sunta maleeshiyaad qabiil, qaarna ka yeela maqaawiir qaran.
Bilihii la soo dhaafay, waxaa muranno doorashooyinku sababeen loo diliyay dhowr hoggaamiye oo Afrikaan ah, sida Madaxweynihii dalka Chad, Idriss Déby iyo Madaxweynahii waddanka Haiti, Jovenel Moïse. Malaha wuxuu ka cabsaday inuu jidkaas maro.
Labo bil kadib markii loo dhiibay xilka Madaxweynaha, wuxuu London, kaga qeyb galay shirkii looga hadlayay amniga Soomaaliya, kaas lagu ballamay in la dhiso ciidamo isku dhaf ah oo gaaraya 18,000 oo askeri oo ka kala imaanaya maamullada, si ciidamo cusub ay amniga dalka ugala wareegaan AMISOM.
Hayeeshee, dhismihii wuxuu ku badelay burburin, wuxuuna kala jabinta ciidanka ka billabay ilaalada Madaxtooda, isagoo guud ahaan ciidankii uu ugu yimid Villa Soomaaliya, ku daadiyay furumaha, isla-markaana ku badelay kuwo intooda badan laga soo daad gureeyay, gobolka Gedo.
Heshiiskii Dowladihii hore la galeen Turkiga, ee la xariiray dib u dhiska ciidanka, ayuu si qaldan u adeegsaday, wuxuuna ciidamada Gorgor iyo Haramcad, ka dhigay fadhiid, danahiisa ka shaqeeya difaacna uga jira taallada Daljirka Dahsoon.